Author: Maujar Mazugami
Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka. Baadhaha waxa ka reebban ku xad-gudubka amarka garsooraha. Ribada iyo macaamilooyinka ganacsi ee dhib u leh bulshada iyo ku xoolaysiga sifo aan sharci ahayni way reebban yihiin.
Maxkamadaha Ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda. Dawladdu waxay oogaysaa shacaa’irta dimiga ah umuurta Diinta ; waxaanay fulinaysaa axkaamta Shareecadda. Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya cid kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa isagana dhaarinaya Madaxweynaha.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Dhammaan xorriyaaka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Aafooyinka dhaca sida abaaraha, duufaanada, cudurrada faafa, dhul garurka iyo dagaalada waxay Dawladdu ka yeelanaysaa ku-talagal. Labadi kal-fadhi cuub u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Ma bannaana in garsooruhu qabto shaqo kale inta uu hayo xilka Garsoorka. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5. Golaha Guurtida waxa loo kala diri karaa habka loo kala dii karo Golaha Wakiilada. Nafta aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo.
Isu-dheellitirrnaanta awoodda dawladnimo oo u qaybsanta; Sharci-dejinta, Fulinta iyo Garsoorka. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado daatuurka uu u gudanwaayo xilkiisa.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed.
cusubb Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf. Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan.
Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana daztuurka uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned. Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Maxamadaha Degmooyinka; iyo 5. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Guurtida. Cusun Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha; d. Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya. Si uu u gudan karo xilalka kor ku sheegan, wuxuu Madaxweynuhu leeyahay awoodaha soo socda: Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda.
Khilaafka Diiniga ah ee abuurma. Guddoomlyaha degmadu, isagoo la tashaday wax garadka tuuladawaxa uu soo jeedinayaa guddida maamul ee tuullo, waxana ansixinaya Golaha Sharci dejinta ee degmada. Xiilli kasta waxa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah: Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka. Nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waxa Iagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goob joog ka yihiin Madaxda Golayaasha Wakiilada iyo Guurtida iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda; 3. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya. Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
Muddada Xilka iyo Xilliga Doorashada. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Xidhiidka Xukuumadda-dhexe ee gobollada iyo degmooyinka waxa caddaynaya xeer gaar ah. Dzstuurka waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Si ay u suurta gasho qaban-qaabinta Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Xeerka Aftida iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka.
Muddada xiIka ee Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha dastuukra 5 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka bo dhaariyo.